၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ကယားပြည်နယ် စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များဥပဒေ (ပထမအဆင့်မူကြမ်း) ရေးဆွဲခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း | Kayah State Hluttaw
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ကယားပြည်နယ် စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များဥပဒေ (ပထမအဆင့်မူကြမ်း) ရေးဆွဲခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း
၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၄ ရက်နေ့၊ နံနက်(၁၀းဝဝ)နာရီအချိန်တွင် ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်ခန်းမ၌ “၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ကယားပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များဥပဒေ (ပထမအဆင့်မူကြမ်း)ရေးဆွဲခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ” ကို ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်နှင့် ဥပဒေအိမ်၊ ဥပဒေပညာရပ်ဆိုင်ရာအသင်းတို့ပူးပေါင်း၍ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များ၊ ဥပဒေလေ့လာစိစစ်အကြံပြုရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ၊ ပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ မြို့နယ် (၇)မြို့နယ်မှ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ၊ အမှုဆောင်အရာ ရှိများနှင့် CSO အဖွဲ့များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ဥပဒေ(ပထမအဆင့်မူကြမ်း) ရေးဆွဲခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ “(၁)စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့နှင့် အခြားဌာနဆိုင်ရာများကြား ကွာဟချက်နှင့် အချင်းချင်း ဘယ်လိုပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မလဲ? (၂)ပါဝင်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအားလုံး ပူးပေါင်း‌ ဆောင်ရွက်မှု၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုနှင့် ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်များ အစရှိသည်များကို စည်ပင်သာယာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ လည်ပတ်မှုယန္တရားတွင် ဘယ်လို ထည့်သွင်းမလဲ? (၃)တောင့်တင်း ခိုင်မာအားကောင်းသည့်ဘဏ္ဍာရေး၊ ဝန်ထမ်းများနှင့် ခေတ်မီ နည်းပညာများရယူနိုင်ရေး အစရှိသည်တို့ကို ဘယ်လိုအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်မလဲ? (၄)ကျေးလက်စည်ပင်သာယာရေးစနစ် ဖော်ဆောင်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဘယ်လိုလုပ် ဆောင်ကြမလဲ?” ဆိုသည့် ခေါင်းစဉ် (၄)ခုဖြင့်ဆွေး‌‌နွေးရာတွင် ဦးခွန်းဒီးဒီမှ ပံ့ပိုးကူညီသူ (Facilitator)အဖြစ်ဆောင်ရွက်ကာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်‌ရောက်လာသူများမှ အပြန် အလှန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး ညနေ(၁၆း၀၀)နာရီ အချိန်တွင် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ အောင်မြင်စွာကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
Older Postတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေး ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း
Newer Post၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ကယားပြည်နယ် စည်ပင်သာယာရေးဥပ‌ဒေ (ပထမ အဆင့်မူကြမ်း)နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပပြုလုပ် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၅ ရက်